Shaqooyinka Dubai ee Musharaxiinta Filibiin - Ku Soo Noqonta Dib Ugu Yeeshaan Maanta! 🥇
Published by Shirkadda Dubai City at January 13, 2018
Shaqooyinka Dubai ee Filipino
Shaqooyinka ku jira Dubai loogu talagalay qurbaha qurbe-joogga ah. Magaaladan waa meel aad u caan ah musharixiinta Filibiin. Kuwa badan baa jira dadka shaqo doonka ah ee ku soo laabanaya UAE. Xaqiiq ahaan, agaasimayaasha Filipinos waxay leeyihiin dareen wanaagsan ganacsi khibrad. Iyada oo ay weheliso aqoon fiican. Iyagu waa si fudud looga helo shaqo Dubai. Iskusoo wada duuboo Filibiin hadda waa si rasmi ah Jamhuuriyadda Filibiin. Ma aha in ay adag tahay in laga soo duusho Philipines halkaas UAE. Xaqiiqdii waa dowlad madaxbannaan oo dalka ah. Jasiirad dal ku taal South East Asia shaqo doonka. Marka sidaa uma fogaan Dubai City. Iyo si kale haddii loo dhigo, dadka reer Filibiin waa Ku soo dhowow UAE shaqo hel.
Wadankan wuxuu ku yaalaa Galbeedka Badweynta Baasifigga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay ka kooban tahay jasiiradaha 7,641. Ka dib oo dhan, taasi waa mid aad u fiican haddii aad jeclaan lahayd inaad booqato Filibiin sida dalxiis. Inta badan caddaynta caddaynta dadka shaqo doonka ah. Taasi waxay awood u yeelan doonaan inay xirfad ku helaan Emirates. Aad bay u fududdahay inay jiraan ku dhawaad ​​raadinta 14,000. Kudarso internetyada shaqooyinka internetka. Ku saabsan sida looga gudbo Filibiin oo aado Dubai.
Dhamaan dadka qurbaha ku nool ee Dubai, waxaan nahay kuwa ugu fiican. Waxaan hadda nahay kaa caawinaya in lagu meeleeyo Emirates. Gaar ahaan haddii aad shaqo ka raadinayso Filibiin. Shirkadda Dubai City waxay caawisay in kabadan konton kun shaqo doonka si shaqo ka hesho Dubai adigoo ah Uber Driver.
Waxaan kaa caawinaynaa inaad bilowdo inaad ka shaqeyso Dubai
Riix hoose si aad udirto CV!
Waxaan shaqo ku siinnay Dubai Dubai Filipino!
Suuqa shaqada ee Imaaraadka oo raadinaya xirfadlayaal
Gaar ahaan shaqaalaha reer Filibiin
Shirkadda Magaalada Dubai ayaa maamushay oo abuurtay. The Shaqo raadintii ugu dambeysay ee shaqo raadinta. Iyo in la tilmaamo waxaan baarnay khabiir shirkadaha shaqaale qorista ee magaalada Dubai ee loogu talagalay Hindiya. Iyo natiijada shaqo-dooneyaasha ka yimid Filibiin. Waxaan ka heli doonaa Dubai fursado ballaaran oo fursado shaqo. Guud ahaan hadalka, Shirkadaha Imaaraadku way koreen. Iyo hawlahooda shaqo qorista ee 2018 ay si fiican u ogaadaan. Dhanka kalena saldhig u ah shaqaalahan Aasiyaanka ah. Waxay leedahay fursado wanaagsan oo ay noqon karto oo ay ka shaqeeyaan shirkadaha ugu qiimaha badan UAE.
Waqti fog, karti leh ugaadhsade shaqo raadis cusub. Qeybta ugu badan, waa hubaal shaqo hel. Hawlaha maaraynta qaarkood. Iyada oo ku saleysan dib-u-eegista ganacsigeenna ee maareeyayaasha HR ee UAE. Iyada oo aan dib loo dhigin Imaaraatka, loo shaqeeyeyaasha ayaa diiradda saari doona ujeedooyinka shaqo-siinta dadka ajnabiga ah ee ku nool UAE. Laga soo bilaabo 2018 ilaa 2020 iyaga oo soo jiidanaya labadaba cusub ayaa ka qalinjabiyey. Iyo madaxda sare ee dibadda ka ah xirfadlayaasha Filipino. Iyo dabcan ee hore Nooca xirfadeed ee shaqada ee Dubai waxaa lagu bixin doonaa Imaaraad. Ku dhawaad ​​dhammaan shaqo dooneyaasha gudaha Dubai Expo 2020.
Ilaa waqtigan xaadirka ah, shaqaalaha Filipino ayaa leh khibrad shaqo oo khuseeya MBA. Laakiin dhammaantood si kedis ah ayaa halkaas uga yimid. Waxay ubaahantahay inay si xoogan uga shaqeyso xirfadaha wada xiriirka. Iyo xaraashka ganacsiga ee suuqa ganacsiga Bariga Dhexe. Shaqooyinka Dubai loogu talagalay Filipino tani waa hab loogu talagalay soogalootiga cusub.
POEA Job Kiralama - Philippine Overseas Employment Employment
Sida la ogsoon yahay habka ugu wanaagsan ee shaqo looga helo Dubai waa POEA. Guud ahaan, Dowladda waxay sii wadaysaa waxbarashada hay'adda. Iyo waxqabadka wakaaladda had iyo jeer isku dayaan ka caawinta shaqada dibada. Dabcan, habka ugu wanaagsan ee looga guuri karo Filibiin iyo Dubai. Ma isticmaali karaa wakaaladaha shaqooyinka dowladda. Wax khatar ah kuma jiri doonto markaad u guurto Emirates.
POEA ayaa dhab ahaantii kugula xidhiidhi kartaa madaxda HR ee Dubai. Sida lagu xusay dunida ganacsiga Emirates. Si deg deg ah ula shaqee dhammaan dadka shirkadaha shaqaalaynta ee Dubai oo loogu talogalay haweeney u tartameysa. Marka loo eego duruufahaas oo ah dawlad ku taal Filibiin. Soo koobitaanka 2019 wuxuu noqonayaa jiil ah dad ganacsi oo caan ah. Ilaalinta shaqooyinka hufan waxay ka caawisaa shaqaalaha Filipino ee shaqeeya. Si aad u hesho a Shaqada Dubai City gaar ahaan Emirates Airline. Si aad u dhigto qaab kale, waxaad la xiriiri kartaa POEA. Iyaguna waxay kaa caawin doonaan inaad sare u qaaddo faahfaahintaada shaqo. Iskuna day inaad kugu xidho bulshada Philippine gudaha Dubai.
Shaqooyinka Poea ee Dubai waxay ku socdaan 2020. Inkastoo tani ay noqon karto xukuumadda dhabta ah ee Imaaraadka. Dhab ahaantii waxay ka caawisaa shaqaalaha Filipino ee Dubai. Si aad u noqotid oo loo xilsaaray shaqooyinka Emirates oo leh POAE. Si aad u tiraahdo wax ka mid ah darajo iyo kala-saarid. Taas waxaad ku maareyn kartaa inaad shaqo ku hesho Emirates. Nidaamka maamulka ee ganacsiga fasalka shaqaalaha Filipino. Waxaad kaloo heleysaa markaad la xiriirto Philippine Overseas Maamulka Shaqada Xafiiska.
2019-2020 Dalabka shaqaalaha Filipinos
The United Arab Emirates arima ahaan hadda yeelanaya magaalo caqli badan. Maalmahan ayaa noqonaya kan labaad ee ugu weyn meelo ka mid ah shaqaalaha Asian. Xaaladahaas awgood, Filipino dibedda ah ayaa jooga. Si fudud u jecel inaad u dhaqaaqdo Emirates. Waxaa jira oo keliya Saudi Arabia ku xigta. Sababtaas awgeed, POEA waxay leedahay shaqo badan oo furan. Wixii 2018 ilaa 2020 Expo Jobs in Dubai.
Falanqaynta ugu dambeysa, waa inaad raadsataa liisaska wakaaladaha awooda iyo goobaha shaqada. Taasna waa inay ku caawisaa. Noqo ugaadhsi shaqo ugu cusub ee UAE. Si kasta ha noqotee, falanqaynta hayadaha shaqaalaynta. Iyo shirkadaha meelaynta adoo ka dhigaya meheraddaada raadinta furaha guusha. Isla mar ahaantaana u fiirso shabakad xafiisyada fulinta ah. Iyo khabiir ku caawin kara. Si aad u noqoto shaqaale tayo leh oo ka yimid Filibiin.
Xilligan, shaqaleysiinta Filipinos waxay amarro shaqo ka heli karaan macaamiisha UAE. In aan laga dhihin wax ka mid ah shaqaalaha aqoonta u leh Filibiin. Kuwa horeba shaqo u helay gudaha 7 Emirates. Isla astaamahaas, waxay si toos ah wax ugu waydiiyaan wakaaladaha shaqaaleynta. Marka ay taasi jirto, shaqaalaynta ugu sareysa ee shaqaaluhu ku taxan yihiin hey'adaha awood abuurka ee aad ka heli karto POAE. Intaa waxaa dheer, Shaqooyinka in Dubai ee Filipino ka ogow furitaanka. In Emirates 7th iyo bilaabaan codsigaaga.
Inaad Filibiin noqoto Dubai
Haddii aad hadda timid Dubai. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabi karto sida aad shaqo ku heli lahayd Dubai oo leh fiiso booqasho. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo sameeyo. Tusaale ahaan, waxaad ku arki kartaa hagidkayaga. Talo-siinta Shaqo ee Dubai ee shaqo raadinta iyo siyaabaha aad naftaada ugu suuq gayn karto. Soo ogow sida aad xirfad ahaan ugu adeegsaneyso resumeygaaga in lagu meeleeyo UAE.
Fikrad kale oo caqli ah ayaa ah jhag tusaha shaqooyinka Dubai. Waxaad fikradaha kala beddelan kartaa shisheeyaha kale isla mar ahaantaasna waxaad ka heli kartaa maamuleyaal shaqaale kireeya UAE. Booqdeyaasha boggayaga internetka ku soo biirista maqaalkeenna ku saabsan shaqooyinka Shirkadda Diyaaradaha ee Shirkadda Diyaaradda. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale jecel yihiin inay fiiriyaan codsi maalinle ah oo ka imanaya maamulayaasha shaqaaleynta. Sidan ayay booqdeyaashayadu shaqo u helaan iyagoo ah Filipino ku nool UAE.
Dhinaca kale, haddii aad rabto inaad noqoto a Filipino Expat Dubai. Waa inaad hubisaa shirkadaha ugu sareeya ee shirkadaha kireysiga ee Dubai. Sanadka soo socda macluumaadku wuxuu fure u yahay guusha. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa talo fiican oo ku saabsan shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay dadka reer Filibiin ah. Kadib u dir CV-gaaga iyo si fudud u hel shaqo cusub.
Dhanka kale, fadlan sidoo kale fiiri fiiri tilmaamahayaga socdaalka. Shirkadda Dubai City waxay wax ka qortaa sida dib loogu celiyo shaqada Dubai. Helitaanka shaqada ee caasimada UAE waxay ubaahantahay dadaal badan oo aad ka shakisan tahay.
Sidee loo helaa shaqo sida safar caalami ah?
Inta badan booqashadeennu waxay shaqo ku helayaan Imaaraadka Macluumaadka socdaalada. Tusaale ahaan, waxaad ku diri kartaa malaayiin dalab oo internetka ah. Laakiin hadaadan helin maamuleyaal shaqaalaysiin. Xaqiiqdi, waxaad waayi doontaa waqtigaaga adigoon wax natiijo ah gabi ahaanba gaadhin. Naftaada hel on codsiyada bulshada sida goobta shaqada TCS. Waa nooc kale oo shaqo raadis ah oo caan ah shaqaale Pakistani ah iyo kuwa qurbajooga laga soo bilaabo Hindiya oo raadineysa shaqooyinka Dubai. Dadka ajnebiga ah ee ka soo kala jeeda wadankooda ilaa Dubai maalin kasta. Sidaas awgeed, shaqooyinkaas Dubai ee Filipino waxay ku fashilmeen inayan hawl fududeyn.
Shaqo helidda sida dalxiisku waa heshiis weyn oo ku saabsan dhinaca wanaagsan ee aad heli karto. Dubai City waa kan ugu fiican meel si aad shaqo u hesho. Hab kale oo caqli leh oo shaqo looga helo UAE. Guud ahaan hadalka waa in helitaanka shaqada suuq-geynta ee Dubai. Qaybtani waxay si aad ah ugu koreysaa Dubai iyo Abu Dhabi. Sababtan awgeed, shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta Filibiin ayaa si furan u furan.
Dhinaca kale, qof kasta waa ogyahay in caasimada UAE waa meesha ugu fiican ee shaqada. Wadamada kale sidoo kale way kufiican yihiin inay shaqo helaan. Waxaad ka heli kartaa shaqooyin banaan oo wanaagsan oo mushahar leh Saudi Arabia iyo Qatar. Laakiin inta badan waaxaha caanka ah ee shaqaalaha caalamiga ah sida Filibiin. Guud ahaan hadalka ayaa ah Xirfadda baabuurta ee UAE. Waxaa jira shaqaale badan oo loo baahan yahay bakhaarada. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha ugu sarreeya shaqada. Shaqaaleeye Dubai iyo Gulf Kiraysiga Shaqaalaynta boggiisa. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Xirfadda Dubai ee shaqaalaha Filipino
Ilaa wakhtigan xaadirka ah, weli Habka ugu fiican waa inaad hesho wareysi socod-socod. Shaqaalaha Filibiinku waxay ku sii kordhayaan waddanka Imaaraadka Carabta. Shirkadda Dubai City waxay gacan ka geysataa shaqaale badan oo shaqo doon ah oo adduunka ka yimid. Sida xaqiiqda ah, qurbajooga helitaanka loo shaqeeyayaasha Dubai iyo Abu Dhabi. Shirkadda Dubai City waxay isku dayeysaa inay dadka kale kula taliso inay shaqo ku hesho UAE.
Sidii Filibiin ah u tagi laheyd, waad awoodi kartaa shaqo u raadsadaan carruurta jooga Dubai. Habka ugu fiican waa in lala xiriiro toos loo shaqeeyeyaasha. Fikradda caqliga badan ee smart waa in la isticmaalo WhatsApp shaqaale cusub oo cusub si loo helo fursado shaqo. Intooda badan kuwa shaqo doonka ah ee booqanaya UAE. Sameynta waxyaabo badan khalad, tusaale ahaan raadinta shaqooyin mushahar badan leh. Xaqiiqdiina, dhammaan waxaad u baahan tahay oo kaliya shaqo aasaasiga ah. Tusaale ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa mihnad sidii shaqaale kulul. Markaa waad horumarin kartaa fursadaha maaraynta huteelada. Si aad u bilowdo waa fikrad fiican.
Fursadaha shaqo ee ugu adag inay galaan Dubai. Dabcan, dabcan, Google ee shaqooyinka Dubai. Maskaxda ku hay in suuqa moobiilka moobiilka maalinba maalinta ka dambeysa ayaa sii kordha. Marka sii wad raadinta shaqooyinka farsamada qaarkood. Ha iloobin in Imaaraadku leeyahay maalgashi sii kordhaya soo saar 2020 shaqooyinka ka jooga Dubai iyo Abu Dhabi. Marka had iyo jeer Hubso inaad diyaar u tahay inaad guurtid.
Abu Dhabi Filibiin
Ilaa hadda, waxaa sidoo kale jira magaalooyin kale oo looga shaqeeyo UAE. Hadaad raadineyso shirkad qorista shaqooyinka ee 2020. Shirkadda Magaalada Dubai marwalba gacan siin gacan. From Dubai ilaa Abu Dhabi iyo Shariah. Waxaanu maamuleynaa adeega shaqaaleynta ee ku yaalla dhamaanba Imaaraadka Carabta. Dabcan mararka qaarkood, waxaan sidoo kale ka caawineynaa helitaanka shaqo Qadar iyo Kuwait. Tusaale ahaan, Abu Dhabi waa meesha ugu fiican ee lagu bilaabi karo shaqooyinka macalimiinta ee UAE.
Abu Dhabi ee Filibiin waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu dejin karo. Waa waxyar oo ka raqiisan marka la barbar dhigo Dubai. Laakiin iska hubi inaadan kaliya ahayn muhaajiriinta raadinaya shaqo. Indian, Qurbajoogta Qadar. Waxaa intaa dheer shaqo doonayaasha ka socda Koonfur Afrika dhammaantood waxaa lagu dhejin karaa Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan, Indiya ayaa shaqo raadinaysa Gacanka. Sidaas awgeed waxa laga yaabaa inay tahay fikrad caqli-gal ah oo lagu kordhinayo raadintaada shaqo.
Abu Dhabi sidoo kale wuxuu leeyahay shirkado waaweyn oo shaqeynaya. Fiiri Shaqooyinka loo yaqaan 'Middle East Cryptocurrency jobs'. Waxaa jira fursad aad u weyn shaqo dooneyaasha cusub iyo booqdayaashaba. Shaqooyinka Dubai ee Shaqaalaha Filibiin way noqon karaan kuwaaga. Ku xajiso CV-gaaga maanta shirkaddayada.
Shaqooyinka Dubai ee Filipino iyo shaqo raadinta UAE!
Waxaan hadda u qoreynaa shaqooyinka Dubai ee Filibiin
Soo hel a Shaqada Dubai si la yaab leh ayaad u heli kartaa. Shaqaalaha Filibiinku waxay sidoo kale bilaabi karaan a xirfad cusub waaxda bangiyada Dubai! Marka si kasta oo aad go'aansato, halka aad ka bilaabi doonto shaqo raadinta. From shirkadaha Saudi Arabia ilaa Shirkadda Dubai City. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino helitaanka a Fursadda cusub ee Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City hadda iyagoo siinaya hagitaan wanaagsan oo ku riyooda Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqo ka helis Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.